केशव दाहाल - कान्तिपुर समाचार
केशव दाहाल का लेखहरु
चुनाव आयो । यो चुनावमा सही निर्णय गर्ने कि आज गल्ती गरेर ५ वर्ष नेताहरूलाई गाली गर्दै बस्ने ? यो प्रश्न मतदातालाई । यहींनेर मलाई पढ्ने प्रिय पाठकहरूलाई साक्षी राखेर केही प्रश्न गर्छु । के तपाई आजको चुनावी ढाँचा, शैली र संस्कृतिसँंग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
केशव दाहाल, कार्तिक १४, २०७४
कुरा अघिल्लो महिनाकै हो । निवर्तमान हुँदै गरेका एक सभासदसँंग इटहरीमा भेट भयो । उनी चाडबाड र चुनावको उल्झनमा थिए । एकातिर जागिर सकिँंदै थियो, अर्कोतिर आउने चुनावमा टिकट के हुन्छ, अत्तोपत्तो थिएन । साँझको समय, तनावमा उनले अलिक बढी नै पिएका थिए ।
केशव दाहाल, आश्विन २७, २०७४
नेपाली राजनीतिमा अंकहरूको खेल अपरम्पार छ । जस्तो– निर्वाचन आयोगमा कति दल दर्ता छन् ? यो अंककै प्रश्न हो । कुन दलले कति मत प्राप्त गर्‍यो ? यो अंकमै सोधिन्छ । कुन दलले कति सिट जित्यो ? कुरा अंककै आयो ।
केशव दाहाल, भाद्र २०, २०७४
पछिल्लो महिना राष्ट्रवादमाथि प्रदिप गिरीका विचार उत्तेजक भनाइ आए । गिरी एउटा पुस्तक विमोचन कार्यक्रम र अर्को संसदमा बोल्दै थिए । उनको भनाइको आशय थियो– ‘राष्ट्रवादको प्रचलित न्यारेटिभ नै व्यर्थ छ’ ।
अझै चर्को बोलौं
केशव दाहाल, श्रावण २५, २०७४
यो लेखमा नेपाली जनताका पछिल्ला प्रश्नहरूको संग्रह छ । अभागी मान्छेका प्रश्नहरू । मान्छेहरू हरेक दिन निराश र अझ निराश हुँदैछन् । निराश मनमा प्रश्नहरू त छन्, तर स्वर मधुरो छ । २०६३ सालसम्म पनि मान्छेमा हिम्मत थियो ।